Yiziphi capacitors? Capacitor izinhlobo kanye nezici zabo
Abantu abaningi bayazibuza ukuthi izinhlobo capacitors? Kukhona capacitors abaningi electronics. izinkomba ezifana capacitance, lo voltage yokusebenza nokubekezelelana kukhona ezinkulu. Lokunye lokubaluleke ngalokulinganako okungukuthi uhlobo yisivikelo, zazo zenziwe. Lesi sihloko kuzoxoxwa kabanzi mayelana nokuthi yini izinhlobo capacitors zivuliwe umqondo Kwe-dielectric Heating.
Capacitors yizici ezivamile electronics. Basuke ihlukaniswa ngokweminyaka ezihlukahlukene izinkomba. Kubalulekile azi ukuthi onobuhle, kuye ngohlobo izinguquko ukubaluleka emelelwa ezahlukene capacitors. Capacitor Izinhlobo:
Amadivayisi ephethe namandla njalo.
Amadivayisi nge variable capacitance ukubukwa.
Imodeli njengoba eyakhiwe.
i-Kwe-dielectric Heating capacitor kungenzeka uhlobo oluhlukile:
Ngokusho indlela ukufaka lezi amadivaysi zenzelwe ukunyathelisa futhi ebusweni obandayo. Ngesikhathi iphakethe lafananako capacitors SMD-ukuguqulwa yilezi:
Sicela uqaphele ukuthi kumadivayisi ngobumba, ifilimu kanye non-polar zinhlobo ungenalo ilebula. Isikhombi sokuthi umthamo wabo zokhahlamba kusuka 1 PF-10 UF. Futhi izinhlobo electrolyte kukhona ngesimo imiphongolo esimweni aluminium futhi abhalwe.
Tantalum uhlobo olufanayo akhiqizwa ezivalekile unxande. Lezi amadivayisi beze wemasayizi nemibala: omnyama, ophuzi kanye orange. Futhi code wokugubha likhona.
Ngesisekelo aluminium capacitors electrolytic ezimbili mncane iphuma aluminium strip. Phakathi kwabo kukhona iphepha eliqukethe electrolyte. Ukukala umthamo kwale divayisi 0.1-100 000 UF. Phela, kule amanga inzuzo yayo esemqoka phezu yezinye izinhlobo. Voltage obuyisilinganiselo 500 V
I yokuntula zihlanganisa anda ukuvuza wamanje kanye ukwehla nge okwandisa imvamisa umthamo. Ngakho-ke, amapulangwe ngokuvamile ndawonye nomuntu capacitor electrolytic isetshenziswa kanye sobumba.
Kufanele kuphawulwe ukuthi lolu hlobo polarity ezahlukene. Lokhu kusho ukuthi kudivayisi okukhipha , Inkomba negative isezingeni zinamandla negative, ngokungafani esiphethweni okuphambene. Uma ungenalo ukulandela lo mthetho, it is Cishe, idivayisi izohluleka. ke Kuyancomeka ukuyisebenzisa ezifundeni nokuba khona DC noma zamanje pulsed, kodwa noma kunjalo akukho AC.
Capacitors electrolytic: izinhlobo kanye injongo
Nazi izinhlobo capacitors electrolytic inikeza anhlobonhlobo. Ziyakwazi:
a ukuvuza ongaphakeme ezingeni lamanje;
nokuba khona okukhiphayo kanzima;
esetshenziswa kuphi capacitors electrolytic kuthiwa? Izinhlobo aluminium capacitors asetshenziswa kumadivayisi ahlukahlukene electronic, izingxenye computer, amadivaysi neuropathy ezifana abanyathelisi, ama-scanner nama ihluzo amadivaysi. Babuye esetshenziswa imishini yokwakha, zezimboni sokulinganisa zomculo, emkhakheni yezikhali nesikhala.
Kukhona ubumba-uhlobo capacitors CM. Zisetshenziswa:
uma udala amadivayisi sokulinganisa izinkomba ezahlukene ngobuciko;
emkhakheni umkhakha lempi.
Amadivayisi yalolu hlobo abe ezingeni eliphezulu ukuzinza. Ngesisekelo izingxenye zawo obusebenzayo ishayela izindlela ezifundeni zamanje variable futhi njalo. Basuke libhekene nenkinga yezinga eliphezulu ukubamba amapuleti eyenziwe zobumba futhi isevisi eside. Lokhu kuqinisekisa inani eliphansi capacitance ukuguquguquka lokushisa Coefficient.
CM capacitors ezincane kodwa ibe nomthamo eliphezulu Inkomba ukufinyelela 2.2 UF. Ushintsho ngentengo yaso uhla lokushisa ukusebenza kule zilwane phakathi kuka-10 no-90%.
Izinhlobo of capacitors Ceramic ka H ngokuvamile lisetshenziswa njengedivaysi adapters noma amadivayisi uvala nokunye. N. amadivayisi Modern ubumba oluqanjwe ukugxisha ngaphansi kwengcindezi ibe iyunithi ebalulekile thinnest metallized amapuleti sobumba.
Izinga eliphezulu amandla impahla kwenza ukusetshenziswa izingcezu nomzimba omncane. Ngenxa yalokho, capacitance, okuyinto wakhona inkomba ivolumu kwandisa ngokucijile.
CM amadivayisi zinezikhathi eziphezulu. Isizathu siwukuthi e ekwakhekeni yabo isebenzisa amatshe ayigugu kanye Alloys yabo: Ag, PL, PD. Palladium kuyisici esihlupha bonke onobuhle.
zobumba Capacitors based
imodeli Disk has ezingeni lelisetulu umthamo. It zokhahlamba kusuka 1 PF 220 NF, futhi ophakeme kunabo yokusebenza voltage akumele ibe ngaphezulu kuka-50 V
Izinzuzo lolu hlobo zihlanganisa:
ukulahlekelwa elincane amandla;
Izinga eliphansi lokungeniswa;
ikhono sokuqhuba amaza okusezingeni eliphezulu;
izinga eliphakeme lokuzinza ezishisayo we esitsheni;
ikhono ukusebenza ezifundeni nge DC, AC and lamanje pulsed.
Multilayer amadivayisi zimumethe kushintshana izingqimba ezondile Ceramic nensimbi.
Lolu hlobo liyafana disc eyodwa-ungqimba. Kodwa zinsizakuphila abe izinga umthamo. Umkhawulo yokusebenza voltage phezu komzimba yomculo ecacisiwe. Kanye imodeli owodwa ungqimba, lo voltage akufanele futhi iyophakama kuno-50 V
Amadivayisi usebenze ezifundeni nge DC, AC and lamanje pulsed.
Plus ephezulu voltage capacitors Ceramic kuyinto ikhono lazo usebenze emazingeni high voltage. Ububanzi voltage yokusebenza zokhahlamba kusuka 50 kuya 15000 V, kanye izinga umthamo kungaba kusuka 68 kuya kwezingu-150 PF.
Ingabe ukusebenza ezifundeni zamanje njalo, variable kanye onesigqi.
amadivaysi Modern zizimele tantalum electrolytic uhlobo zenyathi aluminium. capacitors ngesisekelo tantalum pentoxide.
I capacitors nokuncane voltage inkomba futhi zisebenza, uma kunesidingo, sebenzisa idivaysi nge okukhulu umthamo, kodwa ubukhulu elincane emzimbeni. Kulesi hlobo has izici zayo siqu:
ukuthola esiphezulu ukusebenza voltage kuze 100 V;
kusezingeni anda nokwethenjelwa ekusebenziseni eside;
ukuvuza okuphansi inkomba zamanje;
anhlobonhlobo okushisa ezisebenza;
sibalo capacitance ingase ihluke 47 NF 1000 UF;
amadivaysi abe inductance ongaphakeme futhi asetshenziswa ephezulu imvamisa ukucupha.
Ngaphansi yalolu hlobo itholakala sensitivity high ekwandeni yokusebenza voltage.
Kufanele kuqashelwe ukuthi, ngokungafani uhlobo electrolytic, umugca izindlu ephawulwe ukuphela omuhle.
Yini zinhlobo tantalum capacitors? Izinhlobo tantalum capacitors abelwe kuncike impahla izindlu.
SMD zezindlu. Ukuze womshini amadivaysi sikebhe ezisetshenziswa ebusweni obandayo, cathode exhunywe kwi esibulalayo i resin epoxy equkethe esiliva yamathebhu. It is eziphothene kuze electrode anode kanye Stringer inqanyulwa. Ngemva ukwakha ama-apharathasi sisetshenziswa kuso mshini ezinyathelisiwe. Liqukethe okuzisholo voltage umthamo.
Ngo ukwakha lolu hlobo idivayisi Ezezindlu umqhubi anode ukuba ashiselwe ukuphela anode uqobo bese usika kusukela Stringer. Kulokhu, esibulalayo cathode we capacitor is soldered ukuze substrate. Ngaphezu kwalokho, capacitor ligcwele epoxy yomiswa. Njengasendabeni yabase kuqala, libhaliwe
I capacitors yohlobo yokuqala maningi enokwethenjelwa. Kodwa zonke izinhlobo tantalum capacitors esetshenziswa:
e isiqoqi sama-softwe;
amakhompyutha kanye computer science;
imishini zisetshenziselwa nokusakaza ngethelevishini,
Imishini kagesi ukusetshenziswa yasendlini;
ezihlukahlukene segezi ngoba motherboards, izilimi, njll
Ukufuna amakhambi amasha
Kuze kube manje, tantalum capacitors kukhona ethandwa kakhulu. abakhiqizi yanamuhla ufuna izindlela ezintsha ukwandisa ezingeni amandla lomkhiqizo, nokwenza zezici zalo lobuchwepheshe, kanye nokuncipha okukhulu kwamanani, kanti Wokwakha Ubunye yenqubo ukukhiqizwa.
Kuze kube yimanje, ezama ukwehlisa izindleko ngesisekelo yezingxenye. Landela amarobhothi yonke inqubo ukukhiqizwa nakho kunomthelela ukuwa amanani umkhiqizo.
Impikiswano ebalulekile kubhekwa futhi ukwehla endaweni ebiyelwe ngenkathi sigcina okusezingeni eliphezulu nemingcele lobuchwepheshe. Kakade olwenziwa ukulinga izinhlobo ezintsha housings ekusebenzeni encishisiwe.
Inkomba kudivayisi capacitance yalolu hlobo ingase iqale 1 NF kuya ku-15 UF. Spectrum yokusebenza voltage ingxenye ivela 50 1500 V
Kukhona amacebo nge ntshashintshe of ukubekezelelana (ukubekezelelana umthamo 5%, 10% no 20%).
Lolu hlobo has a lokushisa ukuzinza, eliphezulu umthamo futhi izindleko ongaphakeme, echaza isicelo sabo ezibanzi.
I capacitors ephethe namandla variable
Izinhlobo capacitors variable abe zokusebenza isimiso esithile, okuyinto ekuqongeleleni icala ku electrode amapuleti, ahlukaniswe a Kwe-dielectric Heating. Lezi zingqimba kukhona ukuhamba ezahlukene. Abakwazi uyiswe kwenye indawo.
I ipuleti ezithathekayo ngokuthi Rotor futhi fixed - stator. Uma ushintsha isimo sabo izoshintsha futhi endaweni yemigwaqo, futhi ngenxa yalokho, ngesilinganiso capacitance.
I capacitors ayatholakala ngezinhlobo ezimbili zamakhiwane insulators: emoyeni futhi eliqinile.
Esimweni sokuqala, uzibona abavamile uba Kwe-dielectric Heating. Esimeni sesibili sisebenzise izinto ezenziwe ngobumba, mica nabanye. Materials. Ukuze kwandiswe amandla Inkomba kudivayisi stator futhi Rotor amapuleti ziqoqwa ngamabhulogi, igibele-eksisi olulodwa.
Capacitors nge air Kwe-dielectric Heating uhlobo esetshenziswa njalo capacitance ukulungiswa izinhlelo (isib imisakazo ISIZINDA isethaphu). Lolu hlobo lwe-apharathasi has a ukumelana ephakeme ukwedlula sobumba.
Uhlobo oluvame kakhulu yiwona capacitors njengoba eyakhiwe. Babhekisela uhlobo variable, kodwa ube ukuqina kancane njengoba kancane ngokomthetho.
Nazi izinhlobo capacitors at inhliziyo kulesi sigaba zifaka zobumba metalized. Metal isebenza njengenhlangano electrode, futhi izenzo Ceramic njengenhlangano yisivikelo.
Clay of CA: izici isicelo kanye nokubuyekeza
Skil izando ( "Ikhono"): izici, amathiphu, ukubuyekezwa
Amalahle gas okokubilisa: njengoba kwenzeka
Kanjani isikhwama ezipholile. Indlela ukukhetha cooler bag Amathiphu
Adidas isikhwama ezemidlalo - lula nenduduzo
Izithombe abathakathi we-Halloween ngezandla zakhe: yokugqoka, ukwakheka kanye nezincomo
Isilawuli Intraschool. Intraschool ukulawula for Academic Affairs. ukulawula uhlelo Intraschool
Indlela ukupheka ingulube kuhhavini
Le filimu "New York, I Love You." Abalingisi, izindima, sakhiwo
Arbolit noma ukhonkolo evundile - okuyinto engcono? Incazelo, izici